မြန်မာမွတ်စလင်(မ်)ရေးရာ(ဂျာမဏီ): 11/01/2009 - 12/01/2009
Posted by mbma at Monday, November 30, 2009 No comments:
အဲဒီ အမျိုးသမီး ကို အကြောင်းခံပြီတော့ တစ်ကမ္ဘာလုံးမှာ ရှိကြသော မူဆလင် အမျိုးသမီး အားလုံးကို ဟိဂျဗ် ဝတ်ဆင် နိုင်တဲ့ စွမ်းအား ချီးမြှင့်တော်မူပါ။>>>>>>>>>အာမီး
အောက်ပါ link အတိုင်း Youtube တွင်လဲကြည့်ရှူနိုင်ပါတယ်။
ဂျာမဏီနိုင်ငံရောက်မြန်မာမွတ်စလင်(မ်)များ၏သာရေး၊နာရေးလူမှုရေးအသင်းဖြစ်သော....မြန်မာမွတ်စလင်(မ်)ရေးရာ..(ဂျာမဏီ)...Minority of Burmese Muslim Affair...(M.B.M.A)....အသင်း...၂၀၀၉ခုနှစ်...နှစ်ပတ်လည်အစည်းအဝေးကို..Emmerich Josef Str.13...Frankfurt am Main Höchst, Germanyနိုင်ငံ၌ယနေ့(၂၉.၁၁.၂၀၀၉)တနင်္ဂနွေနေ့..ညနေ(၃း၀၀)နာရီမှစတင်၍ကျင်းပခဲ့ပါသည်။
မြန်မာမွတ်စလင်(မ်)ရေးရာ..(ဂျာမဏီ)...Minority of Burmese Muslim Affair...(M.B.M.A)..အသင်း၂၀၀၉ခုနှစ်အတွင်းလုပ်ဆောင်ခဲ့သော..သာရေး၊နာရေးကိစ္စအ၀၀တို့နှင့်၂၀၀၉ခုနှစ်အတွင်းကျင်းပခဲ့သော....
Posted by mbma at Sunday, November 29, 2009 No comments:
I said something in this wise.
Pardon me,O LOAD
His tast is to disunite
no mosque and no church .
Posted by mbma at Saturday, November 28, 2009 No comments:
Posted by mbma at Saturday, November 21, 2009 No comments:
Posted by mbma at Monday, November 16, 2009 No comments:
Posted by mbma at Monday, November 09, 2009 No comments:
Minority Of Burmese Muslim Affair (Germany)..(M.B.M.A)..အသင်း(၇)နှစ်ပြည့်အထိမ်းအမှတ်..မိတ်ဆုံစားပွဲကို..၇.၁၁.၂၀၀၉ (စနေနေ့)၊တွင်၊Germanyနိုင်ငံFrankfurt am Main Höchstမြို့Pfferrheim St.Josef Kath Kirchengemeinde ခန်းမ၌နေ့လည်(၁၂း၀၀)နာရီမှစတင်၍ညနေ(၅း၀၀)ထိကျင်းပခဲ့ပါသည်။
Posted by mbma at Sunday, November 08, 2009 No comments:
အဲဒီ အမျိုးသမီး ကို အကြောင်းခံပြီတော့ တစ်ကမ္ဘာလုံးမ...